Zuva: Chivabvu 2, 2020
Anenge Makumi maviri Ngarava Dzakapfuura kuburikidza neTurkey Straits
Turkey Statistical Institute (Remus) rokutanga chikamu 2020, maererano nemashoko kubva Istanbul Strait zvino 9 zviuru 734 ngarava. Zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nenomwe zvezvikepe izvi zvakatorwa nemutyairi panguva yekuchinja. Kureba kwemamita mazana maviri [More ...]
Ümraniye Göztepe Metro paSevhisi yeIstanbulites muna 2022
Huwandu hwemakona e coronavirus munyika asvika 3 miriyoni 370 zviuru
Iyo mhando nyowani yekoronavirus inobuda muWuhan, mudunhu reChina Hubey, yaendesa kune vanopfuura mamirioni mazana matatu nemakumi matatu nemazana matatu nemazana mana pasi rose, nekufa kuri kusvika mazana 3 zviuru. MuUSA umo denda rakanyanya kubatwa [More ...]
55 Million Kuparadzirwa Context Koronavirüsl Kutya Mask muTurkey
Mutungamiri Wezvekukurukurirana, Fahrettin Altun akataura kuti mamaki makumi manomwe nemasere akatumirwa kumafamisi mukati mechikamu chekurwisa coronavirus. Altun, evanhu vezvenhau nhoroondo "coronavirus muTurkey" ari mashoko rokuremekedza, rambai kuunza dzimwe zvizvarwa kunyika chibayiro chikuru [More ...]
Railway Conditions 7 Bhirioni Yekudzoreredza Chikwereti kune Air France
Hurumende yeFrance yakaraira "njanji" imwe sarudzo kune iyo mabhiriyoni manomwe emari yekubhadhara chikwereti kune Air France. Saizvozvo, kana vafambi vane chimwe chitima chisarudzo, ndege inokumbirwa kuti ideredze ndege dzayo pamutsetse iwo. [More ...]
Corona Kugadzika Kwekutenga Mall ..! Hapana Chichazoita Senge Chembere
Basa ririkuenderera mberi rekusunungurazve mashopu akavharwa nekuda kwekubuda kwehutachiona. Mukati mehuwandu hwezvidzidzo, zvakadzidziswa kuti huwandu hwevanhu vachazarura kune mashopu ekutenga uye kuchave nemidziyo yekuyera fever pamusuwo. Corana hutachiona hunobuda [More ...]
MaTurkey Vakatumidza VaZita Rawo Mukurapa Munyika
VaTurkey vanotungamira sainzi yemishonga uye vanyore zita ravo mumushonga munyika. Chiremba Biguta muGöktürk, Haruna Chiremba kuKarluk ari pakati pevasingakanganwiki varapi kubvira muna728 AD. Chinyorwa chemabhuku ekurapa, Chiropa [More ...]
Kurambidzwa kudzoka kumba kwakashandurwa kuva mukana muKayseri
Kayseri Metropolitan Municipality, nekuziva mukana wekumisikidza nguva yekudzoka, ari kusimuka mumigwagwa uine density yemotokari pamazuva akajairwa. Meya wedunhu reMetropolitan, akashanyira zvikwata zvinoshanda muSivas Street. Mamdouh [More ...]
Trafiki Yamiswa muBursa Merino Migwagwa Yakagadzirwazve
Bursa Metropolitan Municipality, iyo yakashandura nguva dzekubvakacha kuita mikana muBursa uye yaita zviuru makumi matatu ematani ezviuru zvinopisa pombi inowanikwa mumavhiki maviri apfuura, zvakare panguva yekurambidzwa kufukidza 30-1-2 May. [More ...]
Kugadziriswa kweS-400 Systems Yakatumirwa Pamusoro Nepakabuda
utungamiriri Sözcüİbrahim Kalın akataura panhare yakanzi "Remangwana reIdlib uye vanhu vakatiza muSyria" rakarongedzwa neWashington DC-based Atlantic Council. Mune chirevo chakashinga, Patriot we Erdogan naTrump kakawanda [More ...]
Chivabvu 72 Chivabvu cheVashandi pasi Pe1 Meters yeiyo Ground kubva Kıraç
Kutonga kweIstanbul kwakaronga kongra chaiyo yeKonraç yaMay 1 yeVashandi neSolidarity Day. Iyo kongiri yakaratidzirwa paredhiyo nepaterevhizheni uye neredhiyo nhoroondo. Yakakosha yaMay 1 Yevashandi uye Solidarity Zuva [More ...]
UAV ichashandiswa kekutanga gore rino mukutsvaga moto wemasango
Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Forestry (OGM) yapedza kugadzirira kwayo kurwisa moto wemasango. Munyika yedu, kunyanya sango remahombekombe kubva kuHatay uye kubva kuMediterranean neAegean pamhenderekedzo yegungwa kusvika kuIstanbul. [More ...]
National Combat Ndege Chibvumirano pakati TUSAŞ uye HAVELSAN
Mutungamiri wePurezidhendi weDziviriro Dziviriro. Dr. İsmail Demir yakasaina mushandirapamwe pakati peTurkey Aviation uye Space Viwanda (TUSAŞ) neHAVELSAN, iyo inoitisa budiriro uye zvigadzirwa zvekugadzira yeNational Combat Ndege (MMU) [More ...]
Trade Gurukota Ruhsar Pekcan, mutsva mhando coronavirus (Kovid-19) kukosha nedanho digitalisation mukurwisa denda kucherechedza kuti kamwe zvakare zvinoratidza "Digitalization uye zvigadzirwa upfumi kuitwa mumunda, zvichida panguva Turkey uye nyika [More ...]
Mukuvhiya kwakaitwa nebazi reInternational Trades Enforcing zvikwata mumzmir, zviuru gumi nezvishanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu mairi litre ye ethyl doro rinosvika miriyoni imwe TL yakabatwa, ichiri mune kumwe kuvhiya paEdne Hamzabeyli Forodha Gate. [More ...]
President Soyer Vanoshanyira Asphalt Vashandi uye Vanopemberera May 1 Zuva Revashandi
Izmir Metropolitan Meya Tunç Soyer akashanyira vashandi vakaisa asphalt na 23.00 manheru uye vakapemberera May 1, İşçi Bayram, ndokuvapa baklava. Matimu anoongorora nguva yekunonoka kazhinji haagoni kuvharwa zvachose [More ...]
Favorite yeCanor Canal Tourism maAgency
Chikamu chakanakisa mudunhu reKorinde Isthmus chakasarudzwa kuchera mugero. Kuvakwa kwayo kuri pakati pegumi nemakumi masere neshanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu. Kureba kwayo kuri kuita 1881 km uye inobatanidza neCorinthian Gulf uye Saronic Gulf. MaGiriki majee [More ...]
Nhasi munhoroondo: 2 May 1943 Zonguldak-Kozlu line
Akaraira kuvakwa kweHeazaz Railway yeAdülhamid II paMay 2, 1900 munhoroondo. Sultan Abdulhamid; "Kuvakwa kweHatt-ı Mezkur, iyo yakavakirwa pakubatsira Allah Wemasimbaose uye nerubatsiro rweMutumwa wedu weAllah (SAV)," [More ...]